Malunga nathi -Tianjin YR Chemspec Technology Co., Ltd.
I-Y & R ngumenzi ofanelekileyo kunye nomthengisi ophicothiweyo
kwaye yamkelwe yi-SGS, silandela ngokungqongqo le ndlela
Ulawulo loMgangatho Inkqubo ye-ISO9001: 2015.
Sisebenza kwimveliso kunye nokuhambisa uluhlu olubanzi lweepotifoliyo, izinto ezingafunekiyo, izongezo, izixazululi kunye nokunyibilikiswa kwezonyango / ukhathalelo lomntu, amayeza, ukutya, iH & I kunye namanye amashishini e-Hi-Tech.
Sisoloko sizinikezele kwimveliso ye-state-of-the-art, sisasaza, sifumana iimveliso ezikumgangatho ophezulu, sinikezela nge-7 * 24hrs impendulo kunye nenkonzo.
Umsebenzi wethu kukunceda onke amaqabane ethu ukuba afumane iimveliso ezizodwa zokusebenzisa iifomathi zawo, kwaye ugcine uqinisekisa ukuba zonke izithako / izinto ezingafunekiyo zikhuselekile, zisempilweni, zizinzile zibonelela ngexabiso lokhuphiswano kunye nenkonzo yexesha.
Ukungafihli, iTrust, Ukwabelana, ukusebenzisana yindlela yethu ezinzileyo yokusebenza namaqabane ethu ehlabathi, sihlala sifuna i-'Mutural Trust & Ukwabelana, ukusebenzisana kunye nezibonelelo ', kwaye senza imizamo yethu yokuhambisa iimveliso ezizodwa, iinkonzo kumaqabane ethu.
I-Y & R ayisiyo nje izithako / umthengisi wezinto ezingezizo, singamaqabane akho athembekileyo. ukunciphisa umngcipheko wokuthatha ingqalelo kubo nabaphi na abathengisi abatsha, sinokubonelela ngenkonzo yeepakethe okanye inkonzo yokufumana.
Kule minyaka idlulileyo yophuhliso, i-Y & R iba ngomnye wemithombo ethembekileyo emhlabeni yezithako ezahlukeneyo kunye nezinto zokwenza imichiza.Gxile kugqirha kunye nokubonelela ngeeVithamini, iPVP Polymers kunye nePyrrolidone solvents / intermediates, Polyquaterniums, PVM / MA Copolymers, Acrylates Copolymers, Kojic Acid, Kojic Acid dipalmite njl iimveliso zethu ezibonisiweyo / ezishushu ezinikezela ngeDL-Panthenol, D-Panthenol, Ascorbyl Tetraisopalmitate, Biotin, PVP K30, PVP K90, PVP / VA 64,I-N-Octyl-2-Pyrrolidone, iPolyquaternium-1,Polyquaternium-10, Polyquaternium-11, Acrylates Copolymers, Kojic Acid, Kojic Acid Dipalmite, njlnjl. Umzantsi-mpuma weAsia, uMbindi Mpuma, iAfrika kunye nehlabathi liphela.
I-Y & R ihlala izinikele ekuphumezeni isicwangciso-qhinga sophuhliso olunokwenzeka, sigxile kwimvisiswano yoluntu kunye nendalo yokuzabalazela ukudala indlela ephucukileyo yophuhliso.